ဘယ်အချိန် Scream ရာသီ2Netflix တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း - တီဗီ
ဘယ်အချိန် Scream ရာသီ2Netflix တွင်ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
When Will Scream Season2Be Netflix
ပုံ - MTV
2 အခမဲ့အွန်လိုင်း Atlanta ရာသီစောင့်ကြည့်
Last Chance U Season2သည် Netflix တွင်မည်သည့်အချိန်တွင်ရောက်ရှိမည်နည်း။ မနက်ဖြန်ရာသီ2၏ DC ၏ Legends သည် Netflix ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း
Netflix တွင် Scream Season2လွှတ်ပေးသည့်နေ့ရက်သည်ဘယ်မှာလဲ။
နောက်ဆုံးအဆင့်မြှင့်တင်ထားသည်မှာ အော် ရာသီ2စက်တင်ဘာလ 2016 ခုနှစ်တွင် Netflix သို့လာမယ့်!
အော် ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင် MTV ၏ပြသခြင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးရာသီနှင့် အော် Netflix တွင်ရရှိနိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏စာဖတ်သူများသည်သူတို့ကြည့်ရှုနိုင်သည့်အချိန်တွင်သိလိုကြသည် အော် Netflix အပေါ်ရာသီ 2! သိသာထင်ရှားတဲ့ကျနော်တို့ဒီခေါင်းစဉ်အပေါ်အချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်။
၏ပထမရာသီ အော် MTV ၌ဒုတိယရာသီမတိုင်မီမေလ 2016 တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Netflix တွင်ပြသမည့်ရာသီအတွက်ပုံမှန်ပုံစံဖြစ်သည်။ ပုံမှန်အားဖြင့်ရာသီဟောင်းကို Netflix တွင်ထည့်သွင်းပြီးရာသီသစ်ကိုမကြည့်မီရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်တစ်လအကြာကြည့်ရှုသူများသည်ရာသီအားပြန်လည်ကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ရာသီ Premiere အသစ်များကိုကြည့်ရှုရန်စီးရီးများနှင့်အမီလိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
သိသာထင်ရှားတဲ့အချက်ကတော့စတူဒီယိုတွေမှာရာသီဥတုဒီဗီဒီနဲ့ Blu-Ray ဗားရှင်းတွေကိုရောင်းချခွင့်လည်းပေးတယ်။
ထုတ်ဝေသည့်အချိန်တွင် အော် တတိယရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးမထားပါဘူး ဒါကိုတတိယရာသီအတွက်သက်တမ်းတိုးမယ်ဆိုရင်ကျနော်တို့မျှော်လင့်ထားပါတယ် အော် ရာသီ2စုံတွဲတစ်တွဲရက်သတ္တပတ်မတိုင်မီဖြန့်ချိလိမ့်မည် အော် ရာသီ3Premiere ။ ငါတို့မျှော်လင့်တယ် အော် ရာသီ3အတွက် Premiere လိမ့်မယ် နွေ ဦး နှောင်းပိုင်းသို့မဟုတ်နွေရာသီအစောပိုင်း 2017 ။
အကယ်၍ အော် ရာသီ2နောက်ဆုံးရာသီဖြစ်ပါတယ် အော်ဟစ် ရာသီ2ကိုဇန်န ၀ ါရီလတွင်ကဲ့သို့ Netflix သို့အစောပိုင်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ရာသီသည် Netflix တွင်စီးဆင်းရန်မရရှိနိုင်သမျှတစ်နှစ်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဒါဟာရုံစတူဒီယိုလုပ်ချင်သောအရာကိုပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ငါတို့ဝေမျှခဲ့ကြသည် အော် အောက်ကရာသီ2နောက်တွဲယာဉ်! သငျသညျစီးရီး၏ပထမရာသီပြီးဆုံးပါကကြည့်ရှုပါ!
ကျနော်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၏ပထမရာသီ အော် ယူနိုက်တက်စတိတ်နှင့် Netflix မရရှိနိုင်သည့်အခြားနိုင်ငံများရှိ Netflix တွင်ထုတ်လွှင့်နိုင်သည်။ ပထမရာသီသည်ဆယ်ကြိမ်သာဖြစ်ပြီး၊ သင်သည်ထိုရာသီကိုအလျင်အမြန်လျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည်။
သင်စောင့်နေစဉ် အော် Netflix တွင်စတင်မည့်ရာသီ2ကိုထုတ်လွှင့်သော ၀ န်ဆောင်မှုတွင်ကြည့်ရှုရန် ပို၍ ကောင်းမွန်သောပွဲများကိုရှာရန် Netflix ရှိအကောင်းဆုံးတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ၏ကျွန်ုပ်တို့၏အဆင့်ကိုစစ်ဆေးပါ။ စောင့်ကြည့်ဖို့အကြံပေးလိုပါတယ် လူစိမ်းများ၊ Netflix ရဲ့မူလစီးရီး။ သငျသညျကိုအနည်းငယ်ကြောက်လန့်ခြင်းနှင့်အနည်းငယ်ထူးဆန်းဖြစ်ချင်လျှင်, သင်တို့အဘို့ပြပွဲပဲ!
Netflix ရှိအကောင်းဆုံးထိတ်လန့်ရုပ်ရှင်ကား ၅၀ နှင့် Netflix တွင်အကောင်းဆုံးရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာတီဗွီအစီအစဉ် ၅၀ ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့သတ်မှတ်ထားသည်။ ၎င်း၏ပိုပြီးသင့်ရဲ့စတိုင်လျှင်ထွက်စစ်ဆေး!
အဆိုပါ eric Andre ပြပွဲ streaming
လမ်းကြောင်းရာသီ3စတင်ရက်စွဲ
တစ်ခုခုဘယ်လိုရနိုင်မလဲ netflix ကိုဆက်ကြည့်
အလင်းရောင်ရာသီ2ဇာတ်လမ်းတွဲ9recap